Xukuumadda Ardugaan oo ku guuleysatay kalsoonida barlamanka – SBC
Xukuumadda Ardugaan oo ku guuleysatay kalsoonida barlamanka
Istanbul:-Xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra’iisal wasaaraha dalka Turkiga Rajab Dayib Ardugan ayaa heshay kalsoonida barlamanka kadib markii cod loo qaaday taasi oo u gogol xaaraysa qorshaha la doonayo in dustuur cusub dalka turkiga loo sameeyo.
Ardugan ayaa shaaca ka qaaday toddobaad ka hor dhisitaanka xukuumad cusub iyadoo Axmed Daa’uud Ogloow oo hadda ah wasiirka arrimaha dibadda uu sii hayn doono jagada wasaaradda arrimaha dibadda halka Maxed Shimshik uu sii ahaan doono wasiirka maaliyadda.
Ardugan ayaa u magcaabay Jacfar Jaajaaliyaan wasiirka ganacsiga, halka Ijman Baajees oo ahaa ninka ugu sareeya wadahadalada midowga yurub loo magcaabay wasiirka arrimaha midowga yuub, taasi oo ah wasaarada cusub oo lagu soo kordhiyey xukuumadda cusub.
Xisbiga sinaanta iyo horumarka ee uu hogaamiyo Rajab Dayib Ardugan ayaa ku guuleystay markii saddexaad doorashooyinkii dhacay 12 June ee la soo dhaafay.
Xisbiga ayaa helay 327 kursi oo kamid ah 550 kursi ee barlamanka taasi oo ka dhigaysa %50.2 in uu ku guuleystay codadkii laga dhiibtay doorashooyinkaas.
Guusha xisbiga Ardugan ayaa u horseeday in uu soo dhiso xukuumad aysan axsaabta kale kula loolameen jagooyinka wasaaradaha balse aysan awood u lahayn in xisbiga keligiis uu isbedel ku sameeyo dustuurka ilaa in uu helo mooyaanee isbahaysi axsaabta kale ama shakhsiyaat madaxbanaan oo kuraas kuleh baarlamaanka.
Doorashooyinkii kadhacay dalkaas ayaa waxaa lugu casumay inkabadan 50 malyan oo codbixiyaal ah in ay ka qeyb qaataan, kuwaasi oo loo kala qeybiyey 199 kun oo xarumood oo codka laga dhiibanayo.